Kolombià: #Yodigoaquiestoy, Fitaovana Hanoherana Ny Fampiasana Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2012 12:03 GMT
Tsy vaovao ny olana amin’ny fampiasana ankizy ao Amerika Latina. Tamin’ny taona 2009, namoaka andian-dahatsoratra momba ny fampiasana ankizy eny amin’ny faritra izahay tato amin’ny Global Voices; vao haingana tamin’ny taona 2011, nikaro-bahaolana ho an’ireo ankizy mpiasa tao Bolivia izahay, ary amin’ity taona ity kosa, momba ny fampiasana ankizy eo amin’ny sehatry ny fary (canne à sucre) ao Gòatemala no taterinay.
Tamin’ny 4 Jolay 2012, nanoratra lahatsoratra fohy tao amin’ny tranokala Periodismo Ciudadano (“Fampahalalam-baovao an-olo-tsotra) i Paula Gonzalo, izay mitondra ny lohateny hoe “#Yodigoaquiestoy: una herramienta para denunciar el trabajo infantil en #Colombia” (“#Yodigoaquiestoy [Eto aho hoy aho]: fitaovana hoentina hiadiana amin’ny fampiasana ankizy ao #Kolombia”), nosoritany tamin’izany ny tetikasa hampitsaharana ny fampiasana ny ankizy ao Kolombia miaraka amin’ny fanampian’ny mpiserasera.
Yo Digo Aquí Estoy” (“eto aho hoy aho”) no lohatenin’ilay tetikasa mahaliana iantsorohan’ny fikambanana Fundación Telefónica izay mikendry hampitsahatra ny fampiasana ankizy ao Kolombia, ary manantena ny fandraisan’anjaran’ny mpiserasera. Ankizy maherin’ny 1.800.000 no miasa ao amin’ity firenena ity ary tsy fantatra mihitsy hoe ampiasaina ny 90% mahery amin’ireo ankizy. Izany indrindra no nahatonga ny [mpamorona ny Yo Digo Estoy Aquí] nanapa-kevitra hametraka fitaovana hamantarana sy hahitana ireo ankizy mba hanomezana azy ireo sehatra hananany hoavy mamiratra.
Azonao apetraka na amin’ny finday na amin’ny solosaina ny fitaovana mba ahafahanao mitatitra sy manambara izay mety ho fampiasana ankizy amin’ny fanarahana ireto dingana telo tsotra ireto: Ny dingana voalohany dia ny famantarana ny misy ilay ankizy amin’ny fampiasana ilay sarintany mpamantatra toerana, noforonin’i Ushahidi software, izay ahafahana mametraka vaovao maro araka izay mety, anisan’izany ny sarin’izay ankizy fantatra fa miasa. Notehirizina aminà firaketana (base de donnée) avokoa ny vaovao rehetra amin’izany mba ahafahana miady sy manohitra ny fampiasana ankizy amin’ny fomba mahomby. Voarain’ny polisy avokoa ny vaovao rehetra mikasika izany ka mandray ny andraikiny izy ireo avy eo amin’ny fanesorana ireo ankizy miasa ary mandefa azy ireo any an-tsekoly.
Ny dingana faharoa dia ny fisian’ny tenifototra amin’ny Twitter #yodigoaquiestoy, ahafahanao mitati-baovao amin’ny alalan’ny sioka sy fampiasana izany tenifototra izany. Farany, afaka miditra sy misoratra anarana ao amin’ny fikambanana “Aquí Estoy” ianao ary miara-miasa akaiky amin’izany tetikasa izany.